Ijikwa Egwu | Martech Zone
E nwere ndị na-eto eto n'ofe mba ahụ na-enyo ume ọ hụrụ n'ịhụ Nnyocha Shuttle na-aga nke ọma. Enwere ndị kwenyere na ọtụtụ ijeri dollar ejiri rụọ ọrụ na mbara igwe bụ naanị nnukwu ego. Enweghị m ike ikwenye karịa. Dị ka ọ dị na mbupute a kachasị ọhụrụ, isetịpụ ebumnuche ndị agaghị ekwe omume inweta bụ ihe na-akpali anyị ime mgbanwe na ọganiihu. Ihe omume oghere bu otu n’ime mmemme ndi n’eme nke ahu. Nnukwu ibu bụ njikwa na nyocha nke ihe egwu.
Ndị ụlọ ọrụ ọgwụ ga-eme ya. Ha na-ejikwa ndụ ndị mmadụ egwu egwu iji zọpụta ndụ ndị mmadụ. (Nnukwu ihe omume na Iwu & Iwu n'abalị ụnyaahụ) Ndị na-ere ụgbọ ala na-eme ya. Cadillac tinyere ihe niile n'ihe egwu site na ịhazigharị usoro ha niile. Cheedị ma ọ bụrụ na a nabataghị nhazi ahụ nke ọma?! Gillette na agụba Mach3. Nkọ ma LCD televishọn.
N'ezie, ndị a bụ ihe ịga nke ọma. Enwekwara ọdịda!
Ekwenyere m na azịza na ihe ịga nke ọma ma ọ bụ ọdịda adịghị adabere na ma enwere ihe egwu ma ọ bụ na ọ bụghị. Ọ bụrụ na enweghị nsogbu, ọ ga-abụrịrị na ndị ahụ ga-eripịa gị. Ikike nke nzukọ gị iji tụọ ma nyochaa ihe egwu yana njikere ọ dị itinye ihe egwu ahụ bụ isi ihe na-aga nke ọma.
Tags: ijikwa ihe ize ndụn'ihe ize ndụnjikwa ihe ize ndụ
Naa = More